China Ninja သင်တန်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Haiber ကစားစက်
Ninja သင်တန်းများသည်အတားအဆီးဖြစ်သောသင်တန်းများဖြစ်သောခွန်အား၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ကစားသမားများသည် Endpoint သို့မရောက်မီ Ninja ကဲ့သို့အဆင့်များစွာကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။ နယ်ပယ်များပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သည့်ကိရိယာများသည်အဆင့် (၃၀) ကျော်မှလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်။ Ninja သင်တန်းသည်အားကစားပုံစံမိုးလုံလေလုံကစားကွင်းတွင်လက်မှတ်ကစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Ninja Warrior တစ်ခုစီတွင်လမ်းကြောင်းနှင့်အတားအဆီးအရေအတွက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏တောင်းဆိုမှုစွမ်းရည်နှင့်သင်တန်းတည်ဆောက်မည့်sizeရိယာ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများရှိသည့်အတားအဆီး ၄၅ ခုထက်ကျော်လွန်သောအားကစားအမျိုးအစားတိုင်းရှိလူများကိုစိန်ခေါ်နိုင်သည်။ Ninja သင်တန်းသည် trampoline ပန်းခြံများ၊ FECs၊ အားကစားစင်တာများ၊ လေ့ကျင့်ရေးအဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်အားကစားရုံများတက်ခြင်းအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
Ninja သင်တန်းများသည်အတားအဆီးဖြစ်သောသင်တန်းများဖြစ်သောခွန်အား၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ Ninja သင်တန်းသည် visitors ည့်သည်များကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ Ninja သင်တန်းတစ်ခုစီ၏လမ်းကြောင်းနှင့်အတားအဆီးအရေအတွက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏တောင်းဆိုမှုစွမ်းရည်နှင့်သင်တန်းတည်ဆောက်မည့်sizeရိယာ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများရှိသည့်အတားအဆီး ၄၅ ခုထက်ကျော်လွန်သောအားကစားအမျိုးအစားတိုင်းရှိလူများကိုစိန်ခေါ်နိုင်သည်။ Ninja သင်တန်းသည် trampoline ပန်းခြံများ၊ FECs၊ အားကစားစင်တာများ၊ လေ့ကျင့်ရေးအဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်အားကစားရုံများတက်ခြင်းအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
1. အမြှုပ် Mat
•အမြင့်: ၁၅-၃၀ စင်တီမီတာ (၅.၉-၁၁.၈ လက်မ)
•အမြင့်: ၃၀ စင်တီမီတာ (၁၁.၈ လက်မ)
3. ပလက်ဖောင်း, ကော်လံ padding ကို
Ninja သင်တန်းများသည်အတားအဆီးဖြစ်သောသင်တန်းများဖြစ်သောခွန်အား၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ Ninja သင်တန်းသည် visitors ည့်သည်များကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လေ့ကျင့်ခြင်း၊
Ninja သင်တန်းတစ်ခုစီ၏လမ်းကြောင်းနှင့်အတားအဆီးအရေအတွက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏တောင်းဆိုမှုစွမ်းရည်နှင့်သင်တန်းတည်ဆောက်မည့်sizeရိယာ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများရှိသည့်အတားအဆီး ၄၅ ခုထက်ကျော်လွန်သောအားကစားအမျိုးအစားတိုင်းရှိလူများကိုစိန်ခေါ်နိုင်သည်။ Ninja သင်တန်းသည် trampoline ပန်းခြံများ၊ FECs၊ အားကစားစင်တာများ၊ လေ့ကျင့်ရေးအဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်အားကစားရုံများတက်ခြင်းအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
ရှေ့သို့ Trampoline ပန်းခြံ